ixabiso lokutya okufumaneka kumatshini okuloba ngenxa yeentlanzi,inja,Ukutya kwekati
Amandla:37KW + 1.1KW + 2.2KW izigaba ezithathu
Umthamo:500~ 600kg / h
uhlobo olumanzi lokuntywila okutyisa intlanzi luxhotyiswe nge-boiler enokuqhubeka ngokubonelela ngeshushu eshushu. Ukutya okufunxa okufumaneka kwiintlanzi kunokuvelisa zonke iintlobo ukuntywila okanye ukuntywila kwamanzi okutyela amanzi yentlanzi, I-eel, i-shrimp, unonkala, loach, inkunzi yenkomo, njl, kwaye inokuvelisa iintlobo ezininzi zokutya kwezilwanyana zasekhaya kwikati, inja, njalo njalo. Ubungakanani be-pellet bungasusela kwi-0.9-15mm ukondla iintlanzi ezahlukeneyo. Umthamo ophezulu kunye neemveliso eziphezulu, Uhlobo olunamanzi amaninzi kunye nokuncancisa okufunxwa kokutya kwiintlanzi lukhetho olukhethwayo ngumzi mveliso ophakathi nendawo enkulu yokutya kunye nefama yasemanzini.
Ukuphakama kohlobo lweWet Type Fish Extruder Conditioner
▶ Isikreqo samkele ukwakhiwa kwejakethi, ezinokuthi zifakwe ngaphakathi kwisitya eshushu okanye amanzi okupholisa, ke amaqondo obushushu akhutshiweyo anokulawulwa ngokukuko.
▶ Umbane wokubeka imeko unokwenza ukuba izixhobo zibe ne-gelatinization epheleleyo yesitashi ngokudityaniswa kwesosi eshushu kunye noomatshini behiyar / umxube. Izinto ezisetyenziswayo zinokuhlala zikwimeko encomekayo kangangexesha elingaphezu kwe-180s.
Iimpawu zeFellet Extruder yeFishing yeLantanta
1. I-pellet eyongezelelweyo yokutya okuneentlanzi inokuvelisa i-pellets ezikhuselayo zentlanzi ezidadayo phezu kwamanzi ngaphandle kokuchithwa ngaphezulu 12 iiyure; ubungakanani bepellet yokutya kwentlanzi ingasukela kwi-0.9-15mm
2. Ubushushu obuphezulu kunye nenkqubo yoxinzelelo oluphezulu ingabulala i-salmonellosis kunye nosuleleko lwebhaktiriya kwaye yenza ukuba i-pellets idle ngokulula..
3. Isixhobo sokufudumeza ngombane samkelwe ukuphucula umda wokukhulisa ukutya kunye neepellets ixesha lokuhamba.
4. Amacandelo aphambili asetyenzwa ngonyango lokucoca ulusu ngokuchanekileyo, Yibanobomi obude benkonzo.
5. Ukucwangciswa okwahlukeneyo kweebholithi ze-screw kunokuhambelana neemfuno zokuveliswa kweefomula ezahlukeneyo kunye nezinto eziluhlaza.
6. Ukupheka okukodwa kwesikere: Unobuchule bemveliso ephezulu; Izantya zesikali esiguqukayo
7. Guqula ukubumba okungafaniyo ukwenza i-pellets ngeedayimitha ezahlukeneyo.
Ukusebenza koMgaqo wokuFudusa kweFish Extruder
Intliziyo yomatshini wokufunxa we-pellet extruder isebenza: ukumisela kwangaphambili, ukupheka kunye nokufa ngokubumba. I-boiler ngokuqhubekayo ibonelela ngomphunga oshushu kwi-conditioner, Izixhobo zingaphekwa ngokupheleleyo kwaye ixabiso lesondlo liphuculwe. Inkqubo yokupheka inokubangela inqanaba eliphezulu le-gelatinization yama-starches, isiphumo sokondliwa ngokuqina kwamanzi. Indawo yokutya oyityiwayo yibreach ende ene-screw auger ngaphakathi eyenzelwe ngokukodwa ukufaka imixube yokutya kubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo lwomphunga.. Xa ukutya kuphuma kufayo emgqomeni womgqomo, ubambe umsi ujijitheka ngokukhawuleza, iipellets ezifudumeleyo ezifudumeleyo ziyanda, kunye ne-pellet ye-density encinci yokuhamba emanzini iyaveliswa. Emva koko isixhobo sokusika siya kusika i-pellets eyenziweyo kubude obahlukeneyo njengoko kufuneka. Umrhwebi uguquguquka kwizinto ezininzi, kwaye inokwenza ukutya okunezimpawu ezininzi ezahlukeneyo.
Ukusetyenziswa okubanzi kwePellet Extruder yeFishing yeNtlanzi
1. Umatshini wokutya we-pellet extruder unokuvelisa i-pellets zokutya kwentlanzi, I-eel, i-shrimp, unonkala, loach, inkunzi yenkomo, njl, kwaye inokuvelisa iintlobo ezininzi zokutya kwezilwanyana zasekhaya kwikati, inja, njalo njalo.
2. I-feed pellet extruder ikakhulu iqeshwa kumzi mveliso ophakathi okanye omkhulu wokuveliswa kokutya kunye nefama yasemanzini.
3. Izinto eziluhlaza zinokuba yingqolowa, isoya, ikeyiki kunye nokunye okuseleyo njl. Umgaqo wayo ophambili wokutshintsha amandla oomatshini ukuba babe namandla obushushu ukukhupha izinto.
Ulwazi lobuGcisa lokuFudusa kweNtlanzi yokuFudusa kweentlanzi
Ividiyo yomatshini wokutya owongezelelweyo